महिलाहरु यस्तो बेलामा अत्याधिक उत्सर्ग गर्न चाहान्छन् ! - Muldhar Post
महिलाहरु यस्तो बेलामा अत्याधिक उत्सर्ग गर्न चाहान्छन् !
एजेन्सी २०७६, २१ श्रावण मंगलवार 5068 पटक हेरिएको
एजेन्सी -एउटा सामान्य मानिसका लागि महिलाहरु कुन समयमा बढी कामुक र सेक्सी देखिन्छन् भन्ने जिज्ञासा सामान्य नैं हो । आज हामी यस कुराको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं । बेलायतमा गरिएको एक सर्वेक्षणले शनिबारको रात महिलाहरु सबैभन्दा बढी सेक्सी हुनेगरेको रहस्य बाहिर ल्याएको छ । बेलायतको हेल्थ एण्ड ब्युटी रिटेलर सुपर डगको अध्ययनअनुसार धेरै महिला सातामा एकदिन आफूलाई आफ्नो काबुमा राख्न सक्दैन ।
सोही रात उनीहरुले राम्रो हेयर स्टाइल र सेक्सी स्माइल बढी प्रयोग गर्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । २००० महिलामा गरिएको सर्भेमा आधाभन्दा बढी महिलाले परफ्यूमको हल्का स्प्रे स्पेसल फिल गराउन प्रयोग गर्छन् जसले आफ्नो पार्टनरलाई प्रभावित पार्न सकियोस् । उक्त समयमा महिलाहरुले सेक्सी लुक पाउन नियमित व्यायाम गर्ने, टाइट फिटिङ कपडा लगाउने, शर्ट स्कट र गहना लगाउनले पनि सर्भेका क्रममा भेटिएका छ ।